Dagaallo xooggan oo u dhexeeya ciidamada dawlada & Al-shabaab oo mar kale dib uga qarxay magaalada Muqdisho. – Radio Daljir
Dagaallo xooggan oo u dhexeeya ciidamada dawlada & Al-shabaab oo mar kale dib uga qarxay magaalada Muqdisho.
Juunyo 16, 2009 12:00 b 0
Muqdisho, June 16 | Dagaallo xooggan oo u dhaxeeyey ciidanka dawladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa ururka Al-shabaab ayaa saakay waabarigii ka bilowday deegaanka Galgalato ee waqooyiga magaalada Muqdisho, kuwaasi oo sida la tilmaamay geystay khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira.
Dagaalka ayaa ka danbeeyey kadib markii ay kooxaha islaamiyiinta ahi ay weerar hubaysan ku qaadeen fariisimo ay la haayeen ciidanka dawladda KMG ah ee Soomaaliya weerarkaasi oo isla markiiba isku badalay dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kale duwan.
Dhinacyadii dagaalkaasi u dhaxeeyey ayaa labadooduba sheegtay in ay gaareen guulo la taaban karo oo ay ka soo hoyiyeen dagaalkii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan xaafado ku yaalla dhinaca waqooyi ee magaaladaasi.
Afhayeen u hadlay dhaq-dhaqaaqa Al-shabaab oo Shiikh Cali Maxamuud, ayaa isagu si gaar ah u sheegtay in ay dagaalkaasi ku gacan sarreeyeen ciidankoodu isagoo iska fogeeyey dhankooda in ay jiraan khasaarooyin soo gaaray.
Dhanka kale mas’uul u hadlay dowladda oo ka gaabsaday in la shaaciyo magaciisa ayaa isna sheegay in dagaalkaasi in uu ahaa mid ay ku soo qaadeen xooggaga dawladda ku kacsan balse looga awood roonaaday waa sida uu hadalka u dhigaye.
Dad goob joogayaal ay oo ay la xiriirtay idaacadda Daljir ayaa sheegay in ay arkayeen dad dhaawac ah oo loola sii cararayey goobaha caafimaadka, kuwaasi oo xirnaa dharka shacabka inkastoo aan si rasmi ah loo caddayn karin in ay ahaayeen kooxaha dagaalamaya iyo in kale.
Asbuuc ka hor ayey ahayd markii magaalada Muqdisho ay ka dhaceen dagaallo soconaayey muddo ku dhow labo todobaad kuwaasi oo galaaftay nolosha in ka badan boqol qof halka intaasi tiro ka sii badanna ay ku ku dhaawacmeen, waxaana sidoo kale ay barakiciyeen boqolaal qoys oo hadda la tilmaamayo nolol xumo baahsani in ay ku haysato deegaanno ku yaalla duleedka magaalada Muqdisho.
Dagaalladaan maanta ayaa ku soo beegmay xilli dhowrkii maalmood ee ugu danbeeyey ay deganayd xaaladda magaalada Muqdisho inkastoo in badan oo shacabka reer Muqdisho ah ay wadnaha farta ku hayeen iyagoo ka cabsi qabay dagaal mar kale ka soo cusboonaada halkaasi.
Dagaallo xooggan oo maalintii labaad ka socda Muqdisho, gaystayna khasaare dhimasha iyo dhaawac. [Akhris …]
Arday ka qalinjabisay Machadka Culuumta Caafimaadka ee Bossaso oo helay waxbarasho jaamacadeed ee dalka Sudan. Dhegaysi …